ट्रम्प र किमबीचको बहुप्रतिक्षित शिखर वार्ता संयुक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर ! || सुनौलो नेपाल
ट्रम्प र किमबीचको बहुप्रतिक्षित शिखर वार्ता संयुक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर !
सिंगापुर । बहुचर्चित अमेरिकी र उत्तर कोरियाली शिर्ष नेतृत्वबीचको वार्ता सम्पन्न भएको छ ।
नेपाली समय अनुसार बिहान पौने ७ बजे वार्ता शुरु भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीचको ‘वन अन वन’ शिखरवार्ता सकिएको छ ।
सिंगापुरमा भएको वार्तामा दुवै देशका केही अनुवादकको सहयोगमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमले ‘वन अन वन’ वार्ता गरेका थिए । वार्तामा दुवै देशका शीर्ष नेताले उठाएको विषय भने विस्तृतमा सार्वजनिक भएको छैन । शीर्ष नेताहरुले वार्ता सकारात्मक रहेको र थप वार्ता आ–आफ्ना देशका सरकारी टोलीका बीचमा हुने प्रतिक्रिया अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
अहिले, दुई देशका अधिकारीहरु सम्मिलित वार्ता शुरु भएको छ । दुइ मुलुकबिच ऐतिहासिक वार्तामा उत्तर कोरियालाई परमाणु अस्त्र निशस्त्रीकरण गराउनु आफ्नो पहिलो उद्देश्य रहेको अमेरिकाले बताएको छ । यसको बदलामा उत्तर कोरियाको सुरक्षाको ग्यारेण्टी अमेरिकाले गर्ने र विकासका कुरामा पनि जोड दिने अमेरिकाको भनाई छ ।
अमेरिकाले चीनले चाहेमा वार्ता निष्कर्षमा पुग्ने पनि बताएको छ । उत्तर कोरियाली नेता उनले आफ्नो भावी लक्ष्य विकास र समद्दि हुने बताएका छन् । अन्तराष्ट्रिय लगानीको ग्यारेण्टी पनि खोजेको खबरहरुमा उल्लेख छ । दुई देशको वार्तालाई विश्व समुदायले चासो र उत्सुकताका साथ हेरिरहेको छ ।
२ नेताबीच सहमति भए उत्तर कोरियाले आणविक हतियारको होड त्यागेमा विश्वमा शान्ति स्थापना हुने विश्व समुदायको आशा र अपेक्षा रहेको विश्वभरिका संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।विश्व कै शान्ति प्रकृयाका लागि शिखरवार्ता टर्निङ प्वाइण्ट हुने विश्व समुदायको अपेक्षा छ ।
ट्रम्प मङ्गलबार नै अमेरिका फर्कने
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनसँगको शिखर वार्ता लगत्तै अमेरिका फर्किनुहुने भएको छ ।अपेक्षा गरिएभन्दा चाडो उहाँ वार्ता भएकै दिन बेलुका स्वदेश फर्किन तयार भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाईट हाउसले सोमबार जनाएको छ ।
ट्रम्प र किमबीच मङ्गलबार सिंगापुरमा शिखर वार्ता हुन लागेकोमा वार्ता सकिने वित्तिकै ट्रम्प सोही बेलुका आठ बजे सिंगापुरबाट अमेरिका प्रस्थान गर्नुहुने छ । उहाँहरूबीच बिहान नौ बजे भेटवार्ता हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।
सामूहिक भेटवार्तापछि उहाँहरुका बीचमा एक्ला एक्लै भेटवार्ता हुने छ । एक्ला एक्लै भेटवार्तामा उहाँहरू बाहेक भाषा अनुवादक मात्रै सहभागी हुनेछन् । त्यसपछि विभिन्न दुई पक्षीय भेटवार्ता र खाना खानेलगायतका कार्यक्रमहरु तय भएका छन् । एएफपी
मङ्ल, असार १, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस
व्यापक बन्दै एनसेलको सिम प्रयोग नगरौ भन्ने अभियान, जोडिए अदालतका न्यायाधीश देखि बिद्यार्थी संगठन !
सीसीटीभीमा यस्तो देखियो श्रीलंकाको आक्रमणकारी, झोला बोकेर आए सानो बच्चा देख्दा रोकियो (भिडियो सहित) !
काठमाडौं, ११ वैशाख । एनसेल एक्जियटाले नेपाल सरकारलाई ४० अर्ब भन्दा...
एसीसी अन्डर-१६ पूर्वी क्षेत्र प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले अफ्नो दोश्रो खेलमा मलेसियासंग...
बीबीसी । श्रीलंकाको एउटा चर्चमा बम आक्रमण हुनु अघि आक्रमणकारीको क्रियाकलाप...
कर असुली नगर्दासम्म एनसेल प्रयोग नगरौ भन्दै बिद्यार्थीले थाले अभियान
एनसेलले कर नतिरे सम्म एनसेलको सिम प्रयोग नगरौ – डा सुरेन्द्र भण्डारी (भिडियो अन्तरवार्ता)